Dr. Tint Swe's Writings: Congenital Heart Disease မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါ
1. ဆရာရှင့် ကျမအသက် ၄၅ နှစ်ပါ။ ကျမမှာမွေးရာပါနှလုံး အပေါက်ပိုတခုရှိပါတယ်။ ဟိုအရင်က ဒေါက်တာ့့ နဲ့ ပြဘူးပါတယ်။ ခွဲမှပျောက်မယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့်တာဝန်မယူနိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အတွက် မခွဲခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ မောလိုက် ပျောက်လိုက်နဲ့ အခု ၄၅ နှစ် ရှိပါပြီ။ အခုတ ပါတ်လောက်ကစပြီးရင် ထဲမှာစူးပြီးအောင့်နေပါတယ်။ ကျမရောဂါ တော်တော်ဆိုးနေပြီလားဆိုတာ သိချင်လို့ပါဆရာ ဖြေကြားပေးပါရှင့်။
2. ကျွန်တော် မကြာခင် လက်ထပ်တော့မှာပါဆရာ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော် ယူမယ့်အမျိုးသမီးက နှလုံးရောဂါ ရှိ်နေလို့ ကျွန်တော် ကလေးမယူချင်သေးပါဘူးခင်ဗျာ။ အဲဒါ ယူပြီးကလေးမရအောင် သူရောဂါနဲ့သင့်တော်မယ့် ဆေးများရှိရင် ညွန်ကြားပေးစေလိုပါတယ်ဆရာ။ မြန်မာပြည် မှာရနိုင်မယ်ဆေးမျိုးပေါ့ဆရာ။
3. ဆရာခင်ဗျာမွေးရာပါ နှလုံးအပေါက်ပါတဲရောဂါကိုခွဲစိတ်ကုသရင် ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသလားခင်ဗျာ။
4. ဆရာ့့ က သူငယ်ချင်းမလေးက ကလေးမွေးထားတယဆရာရယ်၊ သူ့ကလေးက တလရှိသွားပြီ။ နှလုံးခုန်မြန်လို့ ဆရာဆေးခန်းသွားပြပါတယ် ကလေးက နှလုံးမှာအပေါက်ပါတယ်ပြောတယ်တဲ့။ ဘယ်လိုမျိုးလဲ အဆို့ရှင်လားဆရာ၊ ဆေးပေးလိုက်ပြီးတလပြန်ချိန်းတယ်တဲ့။ မသက်သာရင် ခွဲရမယ်ပြောတယ်တဲ့။ စိုးရိမ်းပြီး တောတော် သောကရောက်နေရှာတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဆရာကို မေးပေးမယ်၊ ဘယ်လို စောင့်ရှောက်ပေးရမယ် ဆိုတာကို။ သိပ်လဲဗဟုသုတရှိတဲ့ ကလေးတွေ လဲ မဟုတ်တော့လေ။ ဆရာအခု အချိန်မရရင် ပို့စ်လေးတခု ရေးပြီးတင်ပေးပါလားဆရာ
5. မွေးရာပါ နှစ်လုံးရောအကြောင်း ဆောင်းပါလေး သိဖွယ်လေး ဆေးပညာမှတ်စုလေးများရှိရင် ပို့ပေးစေလိုပါသည်။